Obboo Jawaar Mohaammad Ambootti odaaa dhaabe, Ginciitti dhagaa yayyabaa kaahe hardha ammoo pirz. Mulaatuu Teshoomeetiin wal mari’ate
Daarekterii OMN,Jawaar Mohaammad Pirezidaanti Itoophiyaa Mulaatuu Teshoomeetiin wal mari'ate
Daarekterii Omn Jawaar Mohaammadii hardha pirez.Itoophiyaa Mulaatuu Teshomeetiin wal mari'ate
Qabsaahaa mirga namaatii fi daarekterii OMN,Jawaar Mohaammad Omn fuudhee biyyattiin deebi'ee isaa fi dhaaba kanallee nama kuma kurnya hedduutti galma walgahii Finfinnee, Barkumeetti bahee simate.Eegii sunii amma guyyaa sadeessoo keessa jira.
"Ambo ga jidduu galeessa handhura qabsoo Oromooti.Yeroo dheeraadhaaf qabsoon keessatti godhamaa ture.Ginci bakka qabsoon hammaatuun bifa haaraan itti dhooteedha.”
​Jawaar qabsaahota Amboo tana waan hedduun galateeffate. “Yeroo baay’ee na gammachiisa qeeroon Amboo; naamusa,tokkummaa fi cimina isaaniitiin na gammachiisan,” jedhee itti aanee ammoo “waan na gammachiisaaniif waadaa galeef miila duwwaa Amboo bilisoomte keessa deema jedhee murteesse.”
“Jaagmaan bara fincillii Oromoo bara 2001 keessa bifa haaraan adoo hin tahin jalqabame warra jalqaba wareegame keessaa innii ka duraati, dhalota kanaaf fkn taheef tokko."
Tanalee Amboon "hadhura qabsoo Oromoo waan taateef akka yaadannoon waregatootaa achitti dhaabaniif walgahaii irratti na gaafatan jedha Jawaar.
"Siyaasaan mirga sabaa fi sablammii eeguu fi Itoophiyaa demokiraasiitti ceesisu jiraannaan humnaa fi beekumsa ummata keenna dhowwanu hin qabaannu," jedha.